ချားရဟတ် ဂလက်ဆီ - ဝီကီပီးဒီးယား
(NGC 5457 မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 14h 03m 12.6s, +54° 20′ 57″
14° 03′ 12.6″
၂၄၁ ± ၂ km/s
၂၀.၀ ± ၁.၈ Mly (၆.၄ ± ၀.၅ Mpc)
~၁၇၀,၀၀၀ ly in diameter
ချားရဟတ် ဂလက်ဆီ (ပုံမှန်အားဖြင့် NGC 5457 သို့မဟုတ် M31 ဟုခေါ်ဆို) သည် ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၂၁ မီလီယံ ကွာဝေးသော အာရှာ မေဂျာ ကြယ်စုတန်းမှ ခရုပတ်ပုံစံ ဂလက်ဆီဖြစ်သည်။ ယင်းအား Pierre Mechàin ဆိုသူမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ချားလ် မာဆီးယား၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသောကြောင့် ချားရဟတ် ဂလက်ဆီဟု ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပြီး Messier object (M31) ဟု သတ်မှတ်သည်။ ချားရဟတ် ဂလက်ဆီသည် နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီနှင့် နှိုင်းစာလျင် အလွန်ကြီးမားသည်။ ယင်း၏ အချင်းသည် အလင်းနှစ် ၁၇၀၀၀၀ နီးပါးခန့်ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် SN2011fe ဟုခေါ်သည့် ဆူပါနိုဗာတစ်ခုအား NGC 5457 တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
↑ http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2265.html#.VIX5BWf0DDE NASA/CXC/SAO; IR & UV: NASA/JPL-Caltech; Optical: NASA/STScI
↑ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for Messier 101။ 2006-12-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shappee, Benjamin (June 2011). "A New Cepheid Distance to the Giant Spiral M101 Based on Image Subtraction of Hubble Space Telescope/Advanced Camera for Surveys Observations". Astrophysical Journal 733 (2): 124. doi:10.1088/0004-637X/733/2/124. Bibcode: 2011ApJ...733..124S.
↑ (1988) in R. W. Sinnott: The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation / Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4။
↑ Distance Results for Messier 101။ NASA/IPAC Extragalactic Database။ 2010-05-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ SIMBAD-M101။ SIMBAD Astronomical Database။ 2009-11-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Messier 101 - M101 - The Pinwheel Galaxy (Spiral Galaxy)။ Characteristics of M101။
ချားရဟတ် ဂလက်ဆီ on WikiSky: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Articles and images
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချားရဟတ်_ဂလက်ဆီ&oldid=338690" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၈:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။